To raise women rights and gender awareness: အသံထွက် တွေ အသံထွက်တွေ
အသံထွက် တွေ အသံထွက်တွေ
မဗေဒါ ပြောနေကျ စကားလေးပါ.. နော်ဝေးစကားက ဘဝထဲမရောက်တဲ့ စကားဖြစ်တယ်ဆိုတာပါ.. တချို့စကားလုံးတွေက တခြားသောလူမျိုးများထက် အသံထွက် အင်မတန် ခက်ခဲတဲ့ ရွေမြန်မာကျွန်မတို့ အကြောင်းများရယ်ပါ..။ ရုရှနိုင်ငံထဲက စစ်ဖြစ်နေလို့ ဒီနိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ မွတ်စလင် ဘာသာဝင်များဖြစ်တဲ့ ချက်ခြေနီယာ…နောက်.. ပိုလန်.. ဂျာမဏီ… ပါကစ္စတန်.. တူကီ.. ဘရာဇီး.. နယ်သာလန် ..ဒိန်းမတ်….ဖင်လန်…တွေမှာကျတော့ နော်ဝေး အသံထွက်တွေက တော်တော်အားကောင်း တယ်လို့ ဆိုရင်ရမယ်..မဗေဒါတို့ အာရှထဲကမှ မြန်မာ..တရုတ်… ထိုင်း…တွေက အသံထွက်ဆင်းရဲတယ် တခြားသူများ ပိုနားလည်ရ ခက်မယ်ထင်တယ်…ချွင်းချက်တော့နဲနဲရှိသေးတယ်.. ဖိလစ်ပီးကတော့ သိပ်မဆိုးဘူး… အနီးစပ်ဆုံးထွက်နိုင်တယ်လို့ ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်..။ မြန်မာထဲတောင် ဗမာတွေထက် အခြားတိုင်းရင်းသားများက အသံထွက်က ပိုပီသတယ်လို့ နားလည်ပါတယ်..။ ကဲ ဆွေမျိုး များရဲ့ ဘာသာစကားတွေ အဘယ်ကြောင့် ပိုတူအောင် ထွက်နိုင်ကြတာလည်း… သူတို့ရဲ့ မူရင်း စကားလုံးကို ဘယ်လို ရေးသလဲ ဆိုတာကို ကျွန်မ နဲနဲ ကြည့်ရအောင်ပါ..။ ကျွန်မတို့ တွေ့နေကြ စာလုံးတလုံး ကို လေ့လာကြည့်စို့ပါ…။ ရဲ ….. ။ ရဲသားကြီး များဆိုတာကို သတင်းတွေမှာ အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့ရတက်တော့… ဒီစကားလုံးကို ရုပ်သံ မှာလာနေရင် တခြားဘာသာစကားတခု လုံးလုံး မတက်ရင်တောင် ရွီးတုတ် ရမ်းတုတ် လို့ရနိုင်တယ်..။ သူ့ရဲ့ဝတ်စုံရယ်.. ကားကြီးရယ်… လုပ်နေတဲ့ အပြုအမှုများကြောင့် ရဲသားကြီးများကို လူတွေ သိနေကြတယ် ဆိုရမှာပေါ့..။ ဒီ ရဲ ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ဘာသာတွေမှာ ရေးတာက ဒီလိုပါတဲ့ရှင်...။
ထိုင်း ……….. ตำรวจ
ပိုလန် …………… policji
ဖင်လန် ………. Poliisi
ဂျာမဏီ ………… Polizei
ပေါ်တူကီ … polícia
ပြင်သစ်…… de police
အီတလီ …. polizia
ဆွီဒင် …. polis
ကျွန်မကို ထိုင်းနဲ့ စာတွေတူလားလို့ မေးတက်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာစာနဲ့ ထိုင်း ..ထိုင်းနဲ့မြန်မာ.. လုံးလုံးမတူတာ တရုတ်များများ နဲ့ နဲနဲမှ မဆင်ဘူးဆိုတာသာ သိရင် နော်ဝေးစာသင်ရတဲ့ ကျွန်မတို့လို အာရှသားများကို နားလည်စာနာကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့ (အပျော့ဆုံးလေသံဖြင့် ဆွဲဆွဲငင်ငင် ဖတ်ပါရန်) …………..။
ဟိုးတုန်းကတဲက ရေးထားတာလေးပါ..မအားလပ်ပါသောကြောင့် ..ရှိတာလေးကို တင်ပါသည်..။
Posted by mabaydar88 အချိန် ; 2:15 AM